Diyaarad siday 62 qof ayaa ku burburtay Badda Java
America armed forces says the withdrawal of its troops from Somalia is
By axadle	 On Jan 9, 2021
Diyaarad Rakaab ah oo siday in ka badan 60 qof ayaa ku dhacday Badda Java Sabtidii, daqiiqado ka dib markii ay ka kacday caasimada Indonesia ee Jakarta, saraakiisha Indonesia ayaa sheegay, iyagoo xaqiijinaya diidmada muddada dheer ee dalku lahaa ee masiibada duulimaadka.
Masiirka diyaaradda, oo ah Boeing 737-524, ayaa sidoo kale xambaarsan suurtagalnimada in lagu xayiro diyaarad weyn oo Mareykan ah oo ku sugan xaalad dhibaato ah, in kasta oo aan weli la ogaan sababta keentay burburka.
Wasaaradda Gaadiidka ee Indooniisiya ayaa sheegtay xiriirkii ugu dambeeyay ee ay la yeelato diyaaradda, Sriwijaya Air Flight 182, wuxuu ahaa 2:40 pm. waqtiga maxaliga ah. Diyaaradda ayaa ku sii jeeday Pontianak oo ku taal jasiiradda Borneo. Waxaa saarnaa 62 qof, sida ay sheegtay Wasaaradda Gaadiidka. Afar daqiiqo ka dib markii aad soo toostay intii lagu jiray roob mahiigaan ah.
Diyaaradda oo 26 jir ah ayaa lumisay in ka badan 3,000m (10,000ft) oo joog ah wax ka yar 60 ilbidhiqsi, sida laga soo xigtay Flightradar24, oo ah adeegga kormeerka duulimaadka.
Wakaaladda qaran ee baadigoobka iyo samatabbixinta ee Indonesia ayaa sheegtay inay ka heleen qaybo ka mid ah burburka biyaha woqooyi galbeed ee magaalada Jakarta waxayna aaminsan yihiin in laga soo saaray burburka, laakiin mugdiga iyo cimilada qalafsan ayaa hor istaagay baadigoobka iyo samatabbixinta. . Goobta uu burburka ka dhacay waxaa loo yaqaan kunka jasiiradood.
“Berri waxaan booqan doonnaa goobta,” ayuu yiri Soerjanto Tjahjono, oo ah madaxa Guddiga Badbaadada Gaadiidka Qaranka ee Indonesia, fiidnimadii Sabtida, taas oo hoos u dhigeysa rajada laga qabo in la badbaadiyo rakaabka saaran.
Waaxda duulista hawada ee Indonesia, oo ah waddan soo koraya oo leh kumanaan jasiirado ah, ayaa sanado badan waxaa hareeyay shilal iyo khalkhal amni. Maaddaama shirkadaha diyaaradaha ee Indooniisiya, gaar ahaan kuwa qiimaha jaban, ay si deg deg ah ugu dhaqaaqeen inay daboolaan jasiirado badan, warshadaha duulista ee gudaha waxaa caqabad ku noqday dayactirka diyaaradaha iyo u hoggaansanaanta cavalier heerarka amniga.
Muddo sanado ah, shirkadaha xamuulka ee ugu sareeya dalka Indonesia ayaa laga mamnuucay inay u duulaan Mareykanka iyo Yurub.
Laakiin Sriwijaya Air, oo ah diyaaradda saddexaad ee ugu weyn Indonesia oo howlaheeda shaqo bilawday 2003, weligeed wax dhibaato ah ma gaarin.
Sabab kasta ha noqotee, shilku wuxuu ku yimid waqti aad u xun Boeing, oo sumcaddiisa iyo hoosta hoose ay ku burburiyeen laba shil diyaaradeedii 737 Max laba sano ka hor.
Diyaaradii Sriwijaya Air ee laga waayey raadaarka sabtidii waxay kubiirtay diyaarada halista ah ee Boeing 737 500, taas oo loo arko nooc khatar ah kadib shilkii dhawaan dhacay.
Sanadkii 2018, Diyaaradda Lion Air Flight 610 ayaa ku burburtay badda Java iyadoo ay saarnaayeen 189 qof kadib markii cilad ay ku timid nidaamka ka hortagga diyaaradaha ee 737 Max. Diyaarad kale oo 737 Max ah ayaa ku dhacday Itoobiya bishii Maarso ee 2019 ka dib cillad tan la mid ah.
Isku soo wada duuboo, 346 qof ayaa ku dhimatay shilalkaas, taas oo horseeday in la joojiyo duulimaadyadii 737 Max ee adduunka oo dhan, taas oo dhalisay baadhitaano dambiyeed, taas oo keentay in baadhitaan xoog leh laga qaado dawladaha adduunka oo dhan isla markaana horseeday in meesha laga saaro madaxii fulinta. ee Boeing. Bishii Nofeembar, Maamulka Duulista Federaalka ee Mareykanka wuxuu noqday hay’addii ugu horreysay ee duulimaad ee xayiraadda ka qaadda diyaaradaha, kadib markii loo baahday cusbooneysiinta softiweerka, cusbooneysiinta iyo tijaabada tijaabada
Dhamaadkii Diisambar, American Airlines waxay noqotay shirkaddii ugu horreysay ee Mareykan ah ee dib u bilowda duulimaadyadii loo qorsheeyay 737 Max.
axadle 5771 posts
This Is What Occurs to Your Physique When You Hand over
Xiddiga Reer Turkey Ee Cenk Tosun ayaa lagu soo daray